Malunga Nathi - Xiamen Haida Co., Ltd.
Umzi-mveliso wethu wasekwa ngo-1994 uneminyaka engaphezu kwama-27 amava atyebileyo kwaye uhlolwe yi-BSCI, kwaye uphumelele uhlolo lwe-BV, iSGS kunye ne-Intertek, kwaye sihlangabezana nemigangatho yaseYurophu kunye ne-US. Ukuza kuthi ga ngoku, sithenjwa ngabathengi abakhulu kwihlabathi liphela kwaye baphumelele Ukuhlolwa kwefektri, njenge Kmart, Wal-mart, Michel, Lovery, Wastons, Disney, Target, Costco etc. OEM & ODM iinkonzo ezikhoyo.
Ukusukela oko yasekwayo, i-Xiamen Haida Co., Ltd. iye yandisa uluhlu lweprodcut yayo ukusuka kwisipho sokuhlambela esisetiye kwishishini le-skincare ukuya kwipakethe yephepha, isepha eyenziwe ngesandla njalo njalo.Ngophuhliso lweminyaka, iphumelele igama elihle kwihlabathi liphela.Kuze kube ngoku, sithenjwa ngabathengi abakhulu kwihlabathi liphela kwaye baphumelele uhlolo lwabo lwefektri, njenge-Kmart, iWal-mart, iWastons, iDisney, iThagethi, iCostco njl njl. Iinkonzo ze-OEM & ODM ziyafumaneka.
❤Ibhafu kunye nokhathalelo lwesikhumba (ubuhle kunye nokhathalelo lomntu): Sinefektri yethu ngokuthe ngqo, enomthamo wemveliso we-15 yezigidi zeedola ngonyaka.Abathengi abakhulu esisebenza nabo ngaba K-mart, Lifung, Wal-Mart, Sam's Club, Disney, Target, Costco, Lovery, AS-Watsons, Elizabeth Arden, Time Warner, njl.
❤Ikhandlela leSoy: Sinefektri yethu enegunya lokuvelisa i-5 yezigidi ze-USD ngonyaka kwi-100% ikhandlela le-soy ecocekileyo.Ngoku sivelisa ngaphezulu kwezigidi ezi-3 ze-brand yase-US uMichel.Ngoko, kusekho amandla okuvelisa i-4 yezigidi ze-USD.
❤Isepha eyenziwe ngesandla: Ngamava atyebileyo angaphezu kwama-20 kwisiseko sesepha, umzi-mveliso uthengise isepha eninzi esulungekileyo eJapan, eTaiwan naseMalaysia kwaye wafumana igama elihle.Ngoku ngophuhliso olongezelelweyo, umzi-mveliso unoluhlu lweekhathuni kunye nesepha yeentyatyambo ezomisiweyo ezenziwe ngesandla.
GMPC, ISO, BSCI, Wal-Mart, KMART, LIFUNG uphicotho lwefektri
I-100% isiqinisekiso sokuphumelela iimvavanyo ze-ITS, SGS, BV
Abathengi abaMbindi abakhulu
I-K-mart, uyilo lukaMichel luyasebenza, lunyulu,
Lifung, Wal-Mart, Sam's Club, Disney, Target, Costco, Lovery, AS-Watsons, Elizabeth Arden, Time, Warner, njl.
● Sinamathela kuMthengi wokuQala, oThembekileyo kakhulu.Kungakhathaliseki ukuba umthengi omncinci okanye umthengi omkhulu, uya kufumana isisombululo sokupakisha sobuchule kunye nenkonzo ebalaseleyo evela kuthi.
● Siyakuqinisekisa ngobuchule bethu bobugcisa, ixabiso elikhuphisanayo, umgangatho ophezulu, abasebenzi abaqeqeshwe kakuhle, abakhulu ekuguquleleni isiNgesi, ngokucokisekileyo ekuthengeni, ukuhlolwa okungqongqo, kunye nokukhawuleza ekuthunyelweni.
● One Stop Solution: ukufumana, ukuodola, ukuthumela ngenqanawa, iinkonzo zokuhlala,
● Ukukhangela iimveliso kunye nolwazi lwexabiso kunye nokuthumela iisampuli.
● Inkonzo yokwenza iisampulu zomthengi.
●Ishedyuli yonke equka inkonzo yeleta yesimemo, ubhukisho lwehotele, ukukhwelwa nokuqhuba ukuya kwisikhululo seenqwelomoya, ihotele yokungena, inkonzo yemoto yasekuhlaleni, ulonwabo , ukukhapha ukuya kuthenga, ukuguqulelwa njl.njl.
● Ukuhlola imveliso nolawulo lomgangatho.
● Ukudityaniswa kweempahla ezivela kubaboneleli abohlukeneyo & nesikhongozeli sokulayisha.FCL, kodwa kwakhona LCL.
● Ukufaka iodolo yokuthunyelwa kwempahla, isingxobo sokulayishwa, ukukhutshwa kwempahla, kunye nokwenza amaxwebhu okuthumela ngenqanawa.
Phumla intliziyo yakho xa usebenza nathi!Awudingi ukusebenza.Ushiye nje umsebenzi kuthi.Impumelelo yakho, uzuko lwethu!Wamkelekile kwi-Xiamen Haida Co., Ltd. Masiqale ngencinci, kodwa sikhule kunye sibe sikhulu!
Sitsalele umnxeba okanye usibhalele ngoko nangoko, siya kubuya kwakamsinyane.